उमेशको संघर्षको कथामा ‘बोबी–२’ बन्ने | Sagarmatha TVSagarmatha TV उमेशको संघर्षको कथामा ‘बोबी–२’ बन्ने | Sagarmatha TV
उमेशको संघर्षको कथामा ‘बोबी–२’ बन्ने
काठमाडौं । निर्देशक मिलन चाम्सद्वारा निर्मित चलचित्र बोबीले दर्शकको मन जितेसँगै निर्माण पक्षले चलचित्र ‘बोबी–२’ निर्माण गर्ने संकेत गरेको छ । नेपालमा बनेको सम्भवतः पहिलो बायोपिक फिल्म बोबीले राम्रै चर्चा बटुलेसँगै उमेश थापा र कविता गुरुङले बोबी–२ निर्माण गर्ने संकेत गरेका हुन् । बोबीमा उमेश र कविताको प्रेम संघर्षको कथा समेटिएको थियो भने अब बन्ने बोबी–२ मा उमेशको संघर्ष र सफलताको कथा समेटिने जानकारी दिएको छ ।
गत असार २९ गते प्रदर्शनमा आएको बोबीले चौँथो हप्तामा सफल प्रदर्शन जारी राखेको छ । अधिकांश सिंगल थिएटरबाट फिल्म उत्रिसकेपनि मल्टिप्लेक्समा भने अझै शो पाइरहेको छ । बिहीवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच निर्माण टिमले यस फिल्मको सक्सेस पार्टी मनाएको छ । जहाँ निर्देशक मिलन चाम्स, प्रमुख कलाकार उमेश र कवितासहित अन्य कलाकार, प्राविधिक, गायक, संगीतकार, सम्पादक, लेखकको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा निर्देशक र कलाकारसहितको टीमले फिल्मको सफलताको खुसी एकअर्कासँग साटासाट गर्दै सफलताको सबै श्रेय मिडिया र दर्शकलाई दिए । फिल्मले सफलताको झन्डा फहराउँदै गर्दा ‘बोबी’ जोडीलाई पुनः एकपटक पर्दामा हेर्ने दर्शकको चाहना छ । के यो पूरा होला ? उमेश र कवितामाथि पत्रकारले प्रश्न गरे । कविताले पर्दा त घरमा झुन्डिन्छ भन्दै हाँसोको माहोल बनाइन् ।
उमेशले राम्रो स्क्रिप्टबाट अफर आएमात्र काम गर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कहानी छ, दर्शकको डिमाण्ड छ । टाइम मिलाएर मिलन दाई गर्न तयार हुनुभए हामी आउन सक्छौ ।’ निर्देशक चाम्सले उमेशको संघर्षको कथामा ‘बोबी–२’ बन्न सक्ने संकेत गरे । ‘उमेशको कहानी मैले धेरै पटक सुनिसकेको छु । त्यो कहानी झन् दर्दनाक छ । त्यो चिजले पक्कै पनि प्रत्येक नेपालीलाई हौसला मिल्छ । उसको बाल्यकाल कसरी बित्यो, कसरी नर्वे पुग्यो, नर्वेमा गएर के–के ग¥यो ? त्यो कथामा एउटा राम्रो फिल्म बन्छ’, चाम्सले भने ।
उनले उमेशले हातमा लगाएको लौँठी देखाउँदै थपे, ‘यो औँठो उसले प्राप्त गरेको एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो । औँठी हेर्दा नर्मल देखिन्छ । तर, यो भनेको राष्ट्रले गर्व गर्ने कुरा हो । प्रत्येक वर्ष नर्वेजन यूनिभर्सिटीमा टप गर्ने एकजना विद्यार्थीले मात्र यो औँठी पाउँछ । यो कथामा फिल्म बन्न आवश्यक छ । उमेशको संघर्ष र सफलताको कथामा ‘बोबी–२’ बन्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।’ निर्देशक चाम्सले आफू अहिले व्यस्त भएका कारण ‘बोबी–२’ को तत्काल घोषणा गर्न नसक्ने बताए ।
उमेशको जीवनको सफलता र संघर्षको कथामा एउटा राम्रो फिल्म बन्न सक्ने तर्क उनको छ । उमेशले पर्दामा आफूहरुको मात्र नभएर अरुको पनि कथा आउनु पर्ने बताए । उनले भने ‘हाम्रो समाजमा कति धेरै कथा छन् ती पर्दामा आउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । म चाहन्छु कि हरेक नेपालीको कथा पर्दामा आओस् ।
विदेशी फिल्म हेर्दा हामी कति इन्जोय गर्छौँ त्यसरी नै हाम्रै समाजका कथा आउने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो । म सबै निर्देशक निर्माताहरुलाई पनि यो आग्रह गर्छु ।’ चलचित्र ‘बोबी’ को कथा लेखेका सञ्चारकर्मी समेत रहेका नरेश भट्टराईले ‘बोबी २’ को कथा लेख्न आफू तयार रहेको बताए ।